मृत्यु भएका व्यक्ति जिउँदै ! चिकित्सकको दावी: हेड ट्रान्सप्लान्ट अब सम्भव छ – Saurahaonline.com
मृत्यु भएका व्यक्ति जिउँदै ! चिकित्सकको दावी: हेड ट्रान्सप्लान्ट अब सम्भव छ
एजेन्सी । चिकित्सकले एक व्यक्तिको टाउको अर्को व्यक्तिमा प्रत्यारोपण गर्न सक्छन् ? के मेडिकल साइन्सले अन्य अंगजस्तै हेड ट्रान्सप्लान्टेशन सम्भव हुन सक्ला ? बेलायतका एक न्युरोसर्जनले यो विषयमा रोचक र नयाँ तथ्य सार्वजनिक गरेका छन् ।
बेलायतको हल युनिभर्सिटी टिचिङ अस्पतालका पूर्व क्लिनिकल प्रमुख डा. ब्रुस म्याथ्युजले अबको १० वर्षभित्र एक व्यक्तिको टाउको अर्को व्यक्तिमा प्रत्यारोपण गर्न सम्भव भएको बताए । लामो अध्ययनअनुसार रोबोटिक्स, स्टेम सेल ट्रान्सप्लान्ट्स र नर्भ सर्जरीको क्षेत्रमा नयाँ टेक्नोलोजी एडभान्स भएकाले यो सम्भव भएको म्याथ्युजको दावी छ ।
सन् २०१७मा एक चिनियाँ वैज्ञानिकले एक व्यक्तिको सफल हेड ट्रान्सप्लान्ट गरेको दावी गरेका थिए । जिआओपिङ्ग रेन नामका वैज्ञानिकले एक मृत व्यक्तिको टाउको दोस्रो मृत व्यक्तिको शरीरमा ट्रान्सप्लान्ट गरेका थिए । चीनको हार्बिन मेडिकल युनिभर्सिटीले गरेको शल्यक्रिया १८ घन्टासम्म गरिएको थियो । शल्यक्रियाबाट स्पाइनल, नर्भ र ब्लड भेस्सल्सको रिकनेक्ट गरिएको थियो ।
डेली मेलकाअनुसार डा.म्याथ्युजले ब्रेन र स्पाइनल कर्डसँगै राख्न सकिएमा अब छिट्टै आम मानिसले टाउको ट्रान्सप्लान्ट गर्न सक्नेगरी प्रविधिले सहयोग गरेको बताएका छन् । टाउकाको रोग लागेका व्यक्ति र हात खुट्टा खराब भएका व्यक्तिलाई मेडिकलको यो सफलताले ठूलो राहत मिल्ने उनको दावी छ । डा. म्याथ्युजले मरेका व्यक्तिलाई पनि केही समयपछि नै जीवन दिन सकिनेगरी अनुसन्धान भैरहेको बताए ।
युरोप र अमेरिकामा भैरहेको हेड ट्रान्सप्लान्टको अनुसन्धानलाई समर्थन नमिलेको बताउँदै उनले चाडै नै सफलता सार्वजनिक गर्न सकिने बताए । तर चीनले भने हेड ट्रान्सप्लान्टलाइृ अनुमति दिइसकेको छ । रुसका एक कम्प्युटर वैज्ञानिक म्यालेरी स्पिरिदोनोभले २ वर्षदेखि आफ्नो टाउको प्रत्यारोपणका लागि तयारी गरिरहेका छन् । उनी मांसपेशीसँग जोडिएको रोगबाट ग्रसित रहेका छन् ।